Akanakisa mamaboard eRyzen 5 3600 - Yekutenga Nhungamiro (2020) - Pc
Akanakisa mamaboard eRyzen 5 3600 - Yekutenga Nhungamiro (2020)
Kwidziridzo 9.1 kubva kuPUBG ichangobva kuvhurwa uye munhu wese ari kuigadzirira.Saizvozvowo, kana iwe uri kutamba chinotevera chizvarwa Kudevedzwa pabasa, zvinoda iwe kanenge AMD Ryzen R5 1600X kana pamusoro mamodheru. Chokwadi, hazvizokupe iwe mafuremu anodikanwa pasekondi. Kana iwe uri kufunga kukwidziridzwa kuRenzen 5 3600, yekutsigira mamaboard yakakosha zvakare.
Yeiri inoenderana mamaboard inobvumidza iwe kuti uwane kukwidziridzwa pane giraidhi, RAM pamwe neHDD. Nezvo izvi, hauzongokwanisa kutamba Yemazuva Ano Hondo asi akati wandei mitambo inoshamisa zvakare.
Mamwe Maboardboard Ekutenga Guides:
Akanakisa X570 Mabhodhi emama
Akanakisa Z390 Mabhodhi emama
Nzira yekusarudza yakanakisa mamaboard ye AMD Ryzen 5?
1. Graphics Makadhi
Kunyangwe mabhodhi emadzimai achiuya nesarudzo dzekubatanidza kumakadhi emifananidzo ekunze, inofanira kunge iine kadhi remukati zvakare. Kana iwe uri kufunga nezve AMD, Radeon mifananidzo, ita shuwa kuti chishandiso chaunosarudza chinowana mukana wakazara kune yako giraidhi kadhi. Unogona kutsvaga dzimwe sarudzo senge wachi-yekumhanya uye nevamwe kuti uzive zvakawanda nezve izvi. Kuita kuti iwirirane nemakadhi emifananidzo inofanirwa kuve pamberi pekutanga.
2. Fomu Chinhu
Chimwe chinhu chakakosha kufunga nezvacho chimiro chechimwe mama mama chaunosarudza. Ivo vanogona kuuya nemhando dzakasiyana uye maumbirwo. Asi zvakakosha kuyera saizi yako yekabati uye nzvimbo. Kana yako mamaboard yakanyanyisa, haikwane mukati mekhabati. Nekuda kweizvozvo, uchafanirwa kuona kuti zviyero hazvisi zvidiki pane eATX mhando yemamaboardboard.
Vashoma kwazvo vanhu vanoona PCI Slots seyakakosha sarudzo yekufunga nezvayo. Paunotenga chero mamaboardboard, unogona kukwidziridza makore mashoma gare gare. Kukwidziridza zvimwe zvigadzirwa senge RAM kana makadhi ekuwedzera zvinogona kuve zvakakosha zvakaenzana. Kuve nenhamba yepamusoro yePCI slots inokutendera iwe kuti uise zvimwe zvigadzirwa zvemukati mukati mekhabati yako. Ita shuwa kuti ine hushoma yeiyo yakazara-inomhanyisa PCI kadhi slot inowanikwa.
4. Socket mhando
Kungofanana nePCI slot, iyo socket yechero mamaboardboard ndechimwe chinhu chakakosha kufunga nezvacho uchishandisa. Icho chinhu chakakosha kufunga nezverudzi rwakakodzera rwechigadziko iwe uchisarudza mamaboardboard. Panofanirwa kuve nesocket imwe inokwana yako CPU. Inofanira zvakare kuenderana neyako mamaboard futi. Usati waenderera mberi nekutenga yako mamaboard, ita chokwadi nezve mhando yesokisi. Kazhinji, zvigadziko zve AM4 zvinobatsira.
5.Motherboard Kuwedzera Sarudzo
Chimwe chinhu chikuru icho chaunofanirwa kufunga nezvacho kuwedzera kwayo. Ehezve, hauzongotengi mamaboardboard uye kuramba uchishandisa. Iwe uchawedzera huwandu hwedzidzo dzehardware dzinosanganisira mifananidzo, uye zvimwe zvinhu. Izvo zvakakosha kuti uchengete nzvimbo yeaya ese mawedzero kune chako chigadzirwa. Kuwana mamaboard ane standard 4 PCIe slots kunogona kuve kusimudzira kukuru.
Akanakisa mamaboard eRyzen 5 3600:
1.Asus ROG Strix B450-F Kubhejera Mabhodhi
Asus agara achigadzira akavimbika mamaboards uye zvirokwazvo, B450-F anga ari mumwe wavo. Ichi chinoshamisa chigadzirwa chinouya nekureruka kuenderana kwezvizvarwa zvese zveRenzen processor. Ehezve, kana iwe uchida kutamba mitambo yepamusoro-soro neako aunofarira mavara, ichi chigadzirwa chinoshamisa kusarudza kubva.
Zvinoshamisa zvekubatanidza sarudzo senge mbiri M.2 uye USB 3.1 chimwe chinhu chaungade kuva nacho nechigadzirwa ichi. Kushandiswa kwemaviri M.2 uye Gen 2 Type-A zvinongedzo zvinopa mhedzisiro iri nani kwauri. Kuita kweiyi mamaboardboard kwagara kuri kwakanaka uye vatengi vazhinji vakafarira matambiro ainoita pasi neCS: GO uye PUBG. Iwe ungangoda kuve nechigadzirwa ichi kuti ushandise nguva dzose.
AMD B450 Chipset ndiyo ichangoburwa chizvarwa cheprosesa rutsigiro iwe chaunogona kuwana nacho chigadzirwa. Ichi chishandiso chinoshamisa chinouya pamwe nekyber maonero ayo anonzwa anoshamisa kutarisisa paROG I / O nhoo dzinopedzwa mune yakasviba matte nhema kupera. Zviripachena, chero nyanzvi yemitambo ingade kutamba neiyi sehama yangu mudiki.
Ini pachangu, ini ndaizoda kuchengeta ASUS B450-F muPC yangu nekuti inotaridzika kudzedzereka husiku. Ini ndatoona zvinoshamisa sarudzo dzinotonhorera nekuda kweFan Xpert 4 uye kunyangwe vateveri veDC. Iyo ine yakatsaurirwa PWM / DC musoro unogona kutadzisa mvura kutonhora setups. Ehe, kunyangwe mune yakasviba kamuri kana iine yakajeka kabhodhi, iri mamaboardboard munhu wese angafarire.
Vatengi vanoona ichi chinoshamisa chigadzirwa kuve chakakosha kukosha kwemari. Pane zvikonzero zviviri zvakakosha zvevatengi kusarudza iyi mamaboard. Imwe ndeye kukwikwidza kuita kunogadzirwa nechigadzirwa ichi uye imwe yacho maonero e-cyber. Pasina mubvunzo kutaura, Asus ROG Strix B450-F Kubhejera mamaboard inokwira pamusoro pezvose muhomwe yehukama hune hunyanzvi uye nemabatiro ayo ainopa.
Yakanyanya Kukodzera Kune:
Iyi mamaboard isarudzo yakanaka kune vanehunyanzvi vatambi vangade kuve neinosimudzirwa pamusoro peanogadziriswa ma processor uye avo ekutsigira mamaboard. Ichi chakasarudzika mudziyo uchapfuura vamwe.
Vaka mhando yakanyanya kunaka kushandisa
Inotaridzika kunge yakajeka mukabati yakajeka
Ichi chigadzirwa chinouya nehunhu hwakasungwa software
Unogona kuwana AMD chitoro MI rutsigiro
Mutengo wakasununguka kwazvo kushandisa
Iko hakuna wifi module inosanganisirwa neichi chigadzirwa
Iwe ungatarisana zvishoma neBIOS zvinotariswa
Gigabyte X570 nderimwe zita rakakura muchikamu cheakanakisa mamaboards e AMD Ryzen 5 processor. Iyo inouya neyakareruka bios inogadzirirwa nerubatsiro rweiyo Q-Flash yekuwedzera chimiro. Kunyangwe iwe haufanire kumisikidza iyo CPU uye ndangariro nekuti kuisa bios faira yakwana. Inobata akasiyana siyana graphic processors ayo anogona kuvandudza ruzivo rwekutamba.
Kuti uwedzere kuchengetedzeka uye kuvaka muviri, ichi chigadzirwa chinouya neakaganhurirwa I / O nhoo. Iyo yakarongedzwa ine rinorema simbi muviri uye zvinodzivirira zvese zvakakomberedza izvo zvinokutendera iwe kuti uwane muviri wakanaka. Nekuda kweizvozvo, zvinova nyore kwazvo kuti iyi mamaboard iite. Iyo inokutendera iwe kuti uwane musono mashandiro uye nekukurumidza setup nzira dzekushanda nadzo.
Gigabyte X570 inoratidza inoshamisa pfungwa ye12 + 2 simba dhizaini. Iyo izere nedhijitari PWM vatungamiriri kutenderedza mativi ayo anotendera iwe kuti uwane dzakanaka zvinhu. Iyi yedhijitari inogadzirirwa kuti ikupe iwe neinoshamisa kunyatso. Nekuda kweizvozvo, iyo inokutendera iwe kuendesa simba kuzvinhu. Nekudaro, mhinduro kubva kuX750 inonakidza.
Chimwe chinonakidza chiitiko ndeye DDR4 XMP kutsigira. Ichi chishandiso chinogona wachi nyore pa4000 MHZ inoita kuti ive sarudzo huru. Kuti uwane kuita Gigabyte yakaunza XM tambo nechigadzirwa chake. Iyo inokutendera iwe kuti uwane yakagadziriswa yekuita yekuwedzera. Inotsigirwa nemaviri M.2 SSD zvishandiso. Imwe yeayo anouya pamwe neanodziya magadhi kuchengetedza iyo rese setup kutonhorera.
Vatengi vanoda Gigabyte X570 AORUS Elite Motherboard nekuda kwekuenzanisira kwekuita iyo iyo inogona kuburitsa nyore. Vazhinji vavo vakapasa pfungwa yekusarudza iyi mamaboard seinowanikwa x570 rutsigiro. Simply nekuti inouya nemakwikwi mitengo uye mashandiro anoita mudziyo uyu zvirokwazvo haana kufananidzwa.
Gigabyte yakaunza ichi chigadzirwa chemitambo yepamusoro inosangana uye inogona kuve yakanakira nyanzvi. Ichi chigadzirwa chine VRM heatsink iyo inobatsira kuchengetedza zvese zvinosanganisirwa zvinotonhorera. Kune zvakare akawanda madoko ekuisa emvura inotonhorera kutenderedza muviri.
Iyo inouya ne M.2 heatsink neichi chigadzirwa
Yakabatanidzwa I / O nhoo iripo
Ichi chigadzirwa chine zvikamu gumi nezviviri zve digital VRM
Kuti uwane nyore, tinya bhatani reQ-Flash Plus
Main bhodhi ine 24 Pin simba chinongedzo
RGB mwenje ingadai yakave yakawanda
Iko hakuna Type-C chiteshi chinowanikwa
3. Asus Prime B450M-A Yekutengesa Motherboard
Vanhu vazhinji vanoshandisa Asus Prime B450M-A sebhodhi mamaboard uye vane chokwadi nezve ichi chigadzirwa. Paunenge uchibatanidza, iwe uchave unokwanisa kuona kuti iyi mamaboardboard inosangana nyore nyore kune yechitatu chizvarwa Ryzen processor. Nekudaro, iwe uchafanirwa kugadzirisa manzwi iyo bios menyu kana iwe uchida chero shanduko.
Kuuya mukubatanidza, ichi chishandiso chine chinoshamisa kumisikidza. Iwe unogona kubatanidza zvakananga LAN sezvo ichigona kutakura 1GB yekuisa. Kubvumira kumwe kumisikidzwa, ini ndaona vanhu vazhinji vachizvigadzirisa neD-sub pamwe neDVI kuratidza. Sarudzo yekuve neiyo HDMI 2.0 yekupinza zvakare inokutendera iwe kuratidza yako Xbox kana PS5 zvinoenderana nezvaunoda.
Ichi chigadzirwa chinoratidzira inoshamisa DDR4 gondohwe inoenderana iyo inokutendera iwe kuti uwane nyore memory yekuchengetedza. Iyo ine matanhatu akasiyana RAM slots. Iwe unokwanisa kugadzirisa manyore kana kuramba uchiwedzera madhiraivha e RAM maererano nezvamunoda. Chipset yakatsigirwa inoumbwa neiyo AMD B450 modhi inoyevedza munzvimbo inotonhora.
Kuti usimbise iyi mamaboardboard, inoda lithium-ion mabhatiri. Kunyangwe isingauyi nechero RGB yekubatanidza, iwe unogona kushandisa iyi mamaboard ine yakajeka cabinet. Icho chakareruka kurema kuyerwa uye nekudaro, kumisikidzwa hakuzove kwakaomarara kufona zvachose.
Vatengi vakawana chigadzirwa ichi kuva chinoshamisa mune zvakasikwa. Izvo zvinouya nehunhu kuita uko kunofarirwa nevazhinji. Nekudaro, kune vamwe vanhu, avo vakatsamwa pamusoro pemhinduro yevatengi. Kutsiva kweiyi mamaboard kunogona kutora kusvika kumavhiki maviri enguva. Asi kana iwe ukafunga bhajeti uye zvauri kuwana neizvi, kusarudza iyo Asus Prime B450M-A inogona kunge iri sarudzo inoshamisa kune wese munhu.
ASUS mamaboardboard anowanzo kuwanikwa pamakwikwi mutengo. Iyo Asus Prime B450M-A Yekutengesa Motherboard zvakare inouya nemuviri wakanaka wakavakirwa uyo une nzvimbo mukati. Kunyangwe ichave isingave yakanakisa pane ese, maficha uye mashandiro ayo mamaboard anonunura anorapa kune wese munhu. Chero amateur gamer angade kumisikidza yavo mamaboard ne AMD Ryzen 5 3600.
Inoenda zvakanaka nezvizvarwa zvese AMD mhando
Iwe unogona kuwana kwese-kutenderera LAN kurinda kuchengetedza
Rutsigiro rukuru kubva kuASUS control Center
Iyo ine yakadzora kudzora i / o dziviriro yedziviriro
Ichi chigadzirwa chine DRAM kudzivirirwa kwakawanda
Mutengo wakakwira zvishoma
Heatsink haina kunaka pakati pevanokwikwidza
ASRock B450M Motherboard inouya neyakaomarara mashandiro uye yakanaka mapakeji futi. Iyo inodzivirirwa kubva kumativi ese nechero chidimbu chesimbi uye hunhu hwese hweI / O nhoo hwakakura zvakare. Kune akadhinda machira echiteshi anotendera ichi chigadzirwa kuti chinoshamisa mune zvakasikwa. Kuenzanisa mamwe ese mamaboard kubva kuASRock, Pro4 chigadzirwa chinoshamisa kusarudza kubva.
Kuuya kune odhiyo, chishandiso ichi chakagadzirwa neRealtek ALC892. Iyi ndiyo yakajairwa mutyairi weazhinji odhiyo Hardware uye ivo vanoverengerwa pa3uA kuvuza. Ehezve, iwe unogona kuwana zvakapusa kutonga kune ruzha mazinga ayo anotendera iwe kuti ushandise 7.1 migero kune ine simba odhiyo odhiyo. Iko hakuna kudikanwa kwekubuda kwemaziso, asi iwe unogona kuwana HDMI chiteshi kuti zvive nyore mhedzisiro.
Bios setup yeASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard yakanaka kushandisa uye inouya nekuwana kwakakwana kuchigadzirwa. Iwe unogona kusvika kubasa nezvose zvinosanganisira kuongorora, sarudzo dzepamberi, uyezve nekuwedzeredza hunhu. Ivo vanozokubatsira iwe kuti uwane uye kugadzirisa iwo anotungamira matanho. Iwe haufanire kunyange nemaoko kugadzirisa bios.
Ndichiri kuyedza chigadzirwa ichi, ini ndaona kuti chinouya nemhedzisiro yekuwedzeredza mhedzisiro. Ini pachangu, ini ndaitarisira kwakatenderedza 1V ndichiri kushanda. Nekudaro, mhedzisiro yacho yakasarudzika kushandisa kana zvasvika pakubudirira. Zvaitaridzika kuti chigadzirwa ichi chakawana 4.2GHz yakadzikiswa kumhanya nekuwedzeredza pa1 .43V. Haasi mazhinji emamaboardboard anouya pamusoro nekuita kwakasarudzika.
Ndakaona vatengi vazhinji vachifarira chigadzirwa ichi. Vazhinji vanhu vanosarudza ichi chigadzirwa seyakanaka mamaboard kubva kuASRock. Nekuda kweM.2 kuchengetedza uye kuita kunoshamisa, zvinoita kunge sarudzo yepamusoro. Pamusoro peizvi, ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard inopa RGB bhendi pese apa muviri. Nekuda kweizvozvo, inova sarudzo yakanaka kune wese munhu.
Kana mutengo wasvika kuti uenzane nekuita, hapana chinogona kuwana zvirinani pane kushandisa ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard. Inorerutsa mashandiro neepamusoro-magiraidhi giraidhi uye processor rutsigiro. Chero nyanzvi yemitambo mudiwa angada kuve neichi chishandiso kumba kwavo.
Ichi chigadzirwa chinoratidzira kumhanya kwakanyanya uye overulsing dziviriro
Iine zvigadzirwa zveRGB zvitsva kuti zviite sezvakanaka
Iyo inouya neGaming giredhi odhiyo ine simba mune zvakasikwa
Chigadzirwa chinouya nemhedzisiro M.2 yekuchengetedza mhedzisiro
Iyo inotsigira yakanaka PCIEx16 yekadhi rakakura giraidhi
Kuchengetedza kugona kunogona kugadzirisa zvishoma
Mvura inotonhorera ficha inogona kuvandudzwa
5. MSI Performance Kubheta Mini-ITX Motherboard
MSI yakavaka yakawanda yemitambo mamaboard, uye zvirokwazvo, iyi yakakosha mune zvese mazwi. MSI Mini-ITX inouya izere nesoftware suites kubva kumugadziri. Iyo inokutendera iwe kukurumidza kumisikidza bios uye uwane yakazara kutonga kweiri bhodhi. Kuve nesoftware suite pamusoro pevashoma madhiraivha inogara iri mukana wakakura. Iwe unogona kuwana yakakwana ruzivo ruzivo.
Pa-bhodhi odhiyo inokutendera iwe kuti utore nyore mechina ine simba rezwi mhando. Iyo ine maJapan odhiyo maaccitors ayo anoita kuti ichi chishandiso chikwanise kushandisa kwako. Mazhinji mamaMSI emabhodhi ane izvi zvakajairika chimiro sezvo izvo zvinokutendera iwe kumisikidza ekunze maodhiyo madhivha pamativi ese maviri ePBB. Iyo inopa yakawanda yakachena stereo kupatsanurwa iyo inogona kuvandudza iyo yekumashure nhanho.
Memory yekutsigira Mini-ITX ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kutaurwa-nezve maficha echigadzirwa ichi. Iyo inokutendera iwe kuisa maviri DIMM slots ayo anogona kusanganisira nzvimbo ye 64 GB DDR4 RAM ndangariro. Kunze kweizvi, iwe unogona zvakare kuwana imwe 3.0 × 16 PCIe rutsigiro. Izvi zvinogadzira imwe bhenefiti kune icho chigadzirwa icho chinokupa iwe zvirinani sarudzo dzekuchengetedza. Haasi mazhinji emabhodhi emamai anouya neakadai epamberi magadziriso.
Zvimiro senge VRM kutonhora uye kuwedzeredza zvinoita kuti chigadzirwa ichi chishamise futi. Iko hakuna makona mazhinji kutenderedza, asi zvirokwazvo inounza 6 + 2 chikamu VRM kumisikidzwa. Iwe unogona kutarisira inotonhorera ambience yakatenderedza yako CPU kunyangwe iri kushanda kwenguva yakareba. Kuvandudza mhando, MSI yakaunza IR3555 PoweR nhanho dzinonyanya kuwanikwa pane mamwe ekumusoro-magumo mamaboard.
Chimwe chinhu chinodiwa nevatengi nezve chigadzirwa ichi muviri wayo wakavakwa uye unodhura. Mutengo unoshandiswa pachigadzirwa ichi unokwikwidza zvakanyanya muchimiro uye unobvumidza MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard yekupfuura nhanho yevamwe. Ini pachangu ndakaedza iyi mamaboard pane shamwari yangu pc uye yaitaridzika kunge iri kushanda mushe ndichiridza GTA Vice City.
Kana iwe uchida chishandiso chinokupa iwe izere kutonga uye nekukurumidza setup, MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard chigadzirwa chakakodzera kusarudza. Iyo inouya neakawanda mavara ezvitambi uye maAnti antenna ekutsigirwa kweprimiyamu. Iwe ungade kushandisa izvi zvigadzirwa kune ako enguva mhedzisiro.
Kutonhora kweVRM uye kugadzirisa kunovakwa zvakanaka
Iyo inouya nezvose zvakavakirwa-mukati WiFi AC neBluetooth rutsigiro
Ichi chigadzirwa chine B450 chipset maficha
Iwe unogona kuwana yakapusa setup uye kumisikidza kwaitwa mumaminetsi
Tsigiro kubva kuMSI yekuraira nzvimbo yakanaka kushandisa
Mutengoyeiri mamaboardboard yakati rebei
Iko hakuna kodhi yepositi LD inowanikwa neichi chigadzirwa
6.Asus AM4 TUF Kubheja X570 Motherboard
Asus AM4 yakatanga kuvhurwa seyakanyanya mhando modhi. Kunyangwe mutengo weiyi mamaboard wakakwira zvishoma, maficha aunowana neichi chishandiso anounza pasi seimwe yeanokwikwidza mamodheru. Kana iwe uri kushandisa chero yeRenzen 3000 modhi, ichi chinofanirwa kuve sarudzo yepamusoro kuti iwe uende. Inowedzerwa WiFi neBluetooth sarudzo kuti chive chigadzirwa chakanaka kusarudza kubva futi.
Ichi chishandiso chakasimba kwazvo uye chakasimba kushandisa. Iyo inouya mune imwechete I / O simbi muviri unodzivirirwa kubva kumativi ese. Zvese zvakakosha zvinhu zveiyo AMD chikuva zvinouya nemitambo-yakagadzirira maficha. Zvese zvaunoda kuti uite kungoisa ichi chigadzirwa uye chinotanga kushanda ipapo ipapo. Kuuya kune zvakatemwa, chigadzirwa ichi chine zvechiuto-giredhi zvikamu zvakapoterera kune muviri wakagadzikana.
Simba dhizaini yechigadzirwa ichi chinoshamisa isarudzo huru kune wese munhu. Iyo yakafambira mberi VRM nerubatsiro rwe12 + 2 masimba emagetsi. Iwe unogona kushandisa chiitiko ichi kusanganisa nezvose zviri kumusoro-padivi uye pasi-padivi MOSFET madhiraivha ayo anokubatsira iwe kuti uwane zvese mune imwechete pasuru. Izvo zvinounzawo zvese zvazvino maprosesa anodhiza mhedzisiro mhedzisiro. Kuvapo kwematanho emagetsi aDo Mo kunotsanangura kushandiswa kwesimba zviri nani.
Kuuya pamberi peVRM, Asus AM4 inoita kunge inotonhora kupfuura chero chigadzirwa. Iyo inouya neiyo inoshanda heatsink iyo yakatsaurirwa kuPCH pamwe neVRM. Nekuda kwezvinhu izvi, zvinova nyore kushandisa ese emhando yepamusoro magadziriso ehurmware iwe uchitamba mitambo. Iwe unogona kuwana mukana kune ese ari maviri emvura uye fan anotonhorera.
Mutengi wese akatenga Asus AM4 TUF Kubheja X570 Motherboard akabva atanga kudanana neichi chinoshamisa chigadzirwa. Iyo inouya neyakafanira Hardware kumisikidza iyo inokurumidza kumisikidza futi. Iko kusunungurwa kutsva uye nekudaro, haufanire kumirira kuti ivandudzwe futi.
Asus AM4 TUF Kubheja X570 Motherboard inogadzirwa zvakanyanya kune ekupedzisira-magumo mutambo wemitambo. Zvese zvirevo zveichi chigadzirwa zvakanaka kushandisa uye zvakagadzirirwa kukurumidza kuita. Kupfekenura nyaya dzakadzikiswa kusvika pamatanho akaderera zvakare.
Mutengoyeiyi mamaboard inokwikwidza zvakanyanya
Asus AM4 inouya neEFI bios rutsigiro
Iyo inouya pamwe nekushanda kunotonhorera rutsigiro kune chipset
Unogona kuwana rutsigiro rwe2,5 Gb LAN
Iyo inowirirana zviri nyore neRenzen 5 3000 CPU
Iko hakuna yakatsaurirwa PCIex1 chiteshi chiripo
Iwe haugone kuwana chero USB 3.1 slot inowanikwa
Chii chinonzi Ryzen 5 3600?
AMD Ryzen 5 3600 inonyanya kuita-musimboti processor inotangwa ne AMD. Anenge munhu wese ari munyika yekutamba anoziva nezve processor iyi nekuda kweyekupedzisira-magumo magadziriso uye mutoro kugona kwaanogona kuunza kumusoro. Kutaura nezve kudomwa, ichi chinoshamisa chigadzirwa chinouya ne12-tambo AM4 processor processor. Iyo chaiyo Zen 2 yekuvaka inoshandiswa kugadzira ichi chigadzirwa. Chero ipi yeRyzen processor ine yakakwidziridzwa yakadaro inogona kuisa chinoshamisa mashandiro iwe uchiri kutamba aunofarira mitambo.
AM4 mamaboardboard atove nemukurumbira wekuita zvine mutsindo, asi processor iyi inoda mamwe maficha. Ichi chikonzero nei vatambi vachitsvaga iro rinoenderana mamaboard iro rinoenda zvakanaka neichi chigadzirwa. Kuuya kune zvehunyanzvi maratidziro e AMD Ryzen 5 3600, inovakwa ne wachi wachi we3.6 GHz kusvika pahuwandu hwe4.2GHz.
Sezvo inotsigira mbiri-chiteshi DDR4 RAM, kuibatanidza nemabhodhi emama akadaro kunogona kukubatsira kuti uwane mhedzisiro iri nani chero nguva. Vashandisi vanofanirwa kutarisira kutenga mamaboard iyo ine yakakwira huremu maererano neese maGPU neCUU. Chete nekuita izvi, unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinyanya.
Iyo inouyawo iine 65W Dhizaini dhizaini iyo inosanganisira yakavakirwa-mukati yekunyepedzera kutonhora. Mumashoko akareruka, zvinoratidza kuti processor iyi inozopisa.
Ko Ryzen 5 3600 iri nani pane i5?
Ose maviri Ryzen 5 uye Core i5 mitsipa kumutsipa kana ini ndichifananidza iwo maratidziro. Nekudaro, AMD iri kumberi kumberi kana zvasvika pakuita uye zvakare bhajeti mitengo. Zvirokwazvo, mapurosesa kubva kuIntel anoiswa padanho repamusoro. Izvi zvinonyanya kukonzerwa neheatsink. Ehezve, Ryzen 5 ine yakadzika heatsink, asi musimboti i5 wakadzika zvakanyanya uchienzanisa.
Kana iwe uchienzanisa nezvimwe zvinotsanangurwa sekuita, wachi-kumhanya, uye maratidziro zvakada kufanana. Kunyangwe iwo ehunyanzvi maficha eawo maviri akafanana, mashandiro eRyzen 5 anoshamisa uye iri kumberi pamberi pevamwe! Iko kushandiswa kwesimba kweIntel kwakaderera zvishoma. Asi hazvikanganisa mashandiro zvachose.
Nei Ryzen 5 3600 ichizivikanwa zvakadaro?
Ryzen 5 ine akakwikwidza akananga muIntel core i5 kana akadzika magumo mamodheru kubva ku AMD futi. Iwe watoenda kare kuburikidza nemutengo chinhu uye zvinoita sekunge Ryzen 5 haina rukudzo mune izvi.
Kutaura chokwadi, zvinouya neese akakosha maficha ayo chero epamusoro-magumo processor angatakura. Saka iwe unoda inoenderana mamaboard yeiyi. Uchishandisa rako rekare mamaboard neRenzen 5 hazviite kana pasina bios setup inosanganisirwa. Inowanikwa nyore nyore mune chero chitoro chepamhepo uye mutengo unopihwa unowirirana kwazvo.
Ini ndinofanira kuvandudza BIOS yeRenzen 5?
Yese system yekuvandudza inoda mutyairi kugadzirisa. Saka kana iwe ukasasarudza iyo bios yekuvandudza, madhiraivhiti eHardware haazotsigire. Kukwidziridzwa kudiki kwemifananidzo kunogona kunzwisisika. Chokwadi kushandura iro rese mamaboard kunoda iwe kuti unyatso gadziridza bios setup. Kunyangwe ini ndamboedza izvi uye mamwe mamaboards akaita seGigabyte X570 achaita iri basa otomatiki.
Mangani mafeni misoro ini yandinoda yeRenzen 5?
Zvino izvi zvinoenderana nerudzi rwebasa raunenge uchiita. Semuenzaniso, ngatifunge kuti watenga processor iyi yemitambo yepamusoro. Kunyangwe kana iwo mama mama anoenderana ane sarudzo dzakanaka dzekupisa svutugadzike, ma processor e AMD anopisa dzimwe nguva. Yakazara e5 fan misoro inogona kuve yakanakira iwe kushandisa. Iyo yemhepo pombi yekubatanidza yekumvura kutonhodza inogona kuve inobatsira ruoko zvakare.
Ichamhanya Fortnite ine iyoboardboard kadhi yemifananidzo?
Kutaura chokwadi, hapana yakadaro pfungwa yekodhi yemifananidzo kadhi inowanikwa neichi chigadzirwa. Paunenge uchida kutamba Fortnite, unofanirwa kuona kuti zvese zvinodiwa zvehardware zvasangana. Kuti utambe Fortnite, unofanirwa kunge uine AMD Radeon HD 7870 kana GeForce GTX 660 kana mhando dzakakwidziridzwa. Zvirokwazvo, uchichengeta izvi mundangariro, uchafanirwa kuve nechokwadi chekuti zvese zvinofamba zvakanaka.
Ndinovandudza sei yangu Ryzen 5 3600 BIOS?
Pane akasiyana maitiro aunogona kutevedzera kana iwe uchida kugadzirisa yako bios menyu. Mamwe mamaboards akaita seGigabyte anopa q-flash menyu iyo inokutendera iwe kungotora iyi faira uye zororo ichave iri pc yako yekuisa zvigadziriso pese painowanikwa. Nekudaro kana iwe uchida kuita bhuku rekuvandudza, unogona kudhawunirodha bios pane chero flash drive woibatanidza.
Iko x570 inodarika 3600?
Izvi zvinoenderana nezvinhu izvo mamaboard ako akagadzirwa nazvo. Kana ichingova neRenzen 3600, haizopfuure processor. Asi kana paine kukwidziridzwa kwakasiyana pane Hardware senge gpu kana yakazara RAM, zvinokunda zvishoma. Sezvineiwo, kana paine kushomeka pane zvimwe zvinhu zvehardware, iri mamaboard rinowanzo kushomeka dzimwe nguva.
Ko Ryzen 5 3600 inoda kadhi yemifananidzo here?
Izvi zvakare zvinoenderana nerudzii rwebasa rauchazoita neyako pc. Kutaura chokwadi, ichi chigadzirwa hachiuye nechero mhando yemifananidzo yakaiswa kana yakavakirwa-mukati. Graphic kuburitsa iyo iwe yaunogona kuwana yakanyanya kushomeka uye inogara ichida kuti iwe uwedzere imwe. Zvichienderana nerudzi rwebasa raunoita sekutamba mitambo yeHD kana mavhidhiyo emhando yepamusoro, ungatofanira kuisa gpu neiri mamaboard.
Zvakanaka here kuti mutambo utore Ryzen 5?
Ehe saizvozvo. Iko hakuna kunetseka kwakawanda mukutora Ryzen 5 uye inofanirwa kuzadzisa zvaunotarisira. Tichifunga nezve Ryzen 5, ine inoshamisa wachi kumhanya. Saka mu-mutambo ruzivo neiyi processor inosungirwa kuenda zvakanaka. Panguva imwecheteyo, mazita eAAA akakosha kuvashandisa kupesana neiri mamaboard. Izvo zvinokubatsira iwe kutora akanaka mafuremu pasekondi data.
Kusarudza AMD Ryzen 5 3600 inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vanhu vanoda kutamba mitambo yakaita seFortnite kana kutofona kweDuty: Yemazuva ano Hondo. Zvinodikanwa zvinongedzo zvekutamba mitambo yakadai zvichave zvakakwirira.
Nekudaro, kusarudza seti inoenderana ye Hardware seGPU, RAM kana kunyangwe yakanaka mamaboard yakakosha. Anowirirana mamaboards anotendera iyi processor kuti igare inotonhorera kunyangwe yagadzira huwandu hukuru hwekupisa.
Kana iwe usingade kuti processor yako ipunzike kana uchitamba mutambo wako waunofarira, sarudza chero ipi pakati peiyi runyorwa rweakanyanya mamaboardboard e AMD Ryzen 5. Ngatitaurirei kuziva nezvekuti ndeipi yawaifarira zvakanyanya uye nemabatirwo ayo.
Akanakisa Wireless Kubhadharisa Mapedhi (2020) - Android & iPhone
vhidhiyo mupepeti senge imovie ye windows
nzira yekupfuura tumblr yakachengeteka modhi
harry potter nehafu yeropa muchinda chikamu 2
mawebhusaiti ane emahara mafirimu uye terevhizheni